Saraakiil Maraykan ah oo Kuuriyada Woqooyi u jooga dardar gelinta kulankii Trump iyo Kim - BBC News Somali
Saraakiil Maraykan ah oo Kuuriyada Woqooyi u jooga dardar gelinta kulankii Trump iyo Kim
28 Maajo 2018
Saraakiil Maraykana ayaa u jooga Kuuriyada Woqooyi sidii uu u suurtoobi lahaa shir madaxeed ay yeeshaan Madaxweyne Trump iyo Kim Jong-un.
Wasaaradda arimaha dibadda Maraykanka ayaa xaqiijisay in wada xaajood ka socdo dhanka Woqooyiga ee magaalada Panmonjom ee ku taalla xadka labada Kuuriya u dhexeeya ee milatariga ka caaggan.
Danjirihii hore ee Maraykanka u fadhiyey Kuuriyada Koonfureed, Sung Kim, oo hogaaminaya weftiga Maraykanka ah yaa la shiraya Choe son Hui, oo ah wasiir ku xigeenka arimaha dibadda Kuuriyada Woqooyi.
Waxaana loo malaynayaa in shirkaas ay diirradda ku saarayaan arimaha suurto gelin kara in baab'inta nukliyeerka lagu lafo guro shir madaxeedkaas oo markii hore la qorsheeyey in uu ka dhaco Singapore bisha June.
Xog BBC-du heshay ayaa iyaduna tibaaxaysa in ay suurto gal tahay in Isniinta wadahadallo kale oo dheeraad ahi qabsoomaan.
Tan iyo markii Madaxweyne Trump todobaadkii hore sheegay inuu baajiyey shir madaxeedkaa, ayaa labada dhinacba la moodayey in ay isku dayeyaan in la suurto geliyo in qorshaha sidiisii lagu soo celiyo.
Labada hoggaamiye ee Kuuriyada Woqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa iyaguna waxay si lama filaan ah ugu kulmeen isla magaaladaa xadka ku taal, waxaana wararku sheegeen in kulankaa uu codsaday Kim Jong-un.
Waxaa shirka lagu abaabulay muddo 24 saacadood gudahood oo keliya.
Intii wada hadalladu ay socdeen madaxweyne Moon waxaa uu sheegay in Mr Kim uu si xoog leh u doonayo in dhulka Kuuriya laga dhigo meel hubka nukliyeerka ka reebban laakiin aanu hubin in Washington ay dammaanad qaadeyso nabadgelyada xukuumaddiisa.
Si kastaba ha ahaatee, mar la weydiiyay in Mr Kim ay ka go'an tahay inuu iska dhiibo hubkiisa nukliyeerka oo dhan, madaxweyne Moon waxaa uu sheegay in loo baahan yahay in Maraykanka iyo Kuuriyada woqooyi ay wada hadal yeeshaan si ay u caddeeyaan ujeeddooyinkooda.
Trump: U diyaar garowga kulanka Kim si fiican buu u socdaa
Hoggaamiyeyaasha labada Kuuriya oo yeeshay shir madaxeed lama filaan ah
Waxaa uu intaas ku daray in labada Kuuriya ay doonayaan inay Maraykanka kala shaqeeyaan in la gaaro bayaan rasmi ahaan lagu soo afjarayo dagaal Kuuriya ka jiray kudhowaad 70 sano.
Mr Moon waxaa uu shirka jaraa'id qabtay maalin kaddib markii uu shir-madaxeedka la yeeshay hoggaamiyaha Kuuriyada woqooyi:
Kaddib markii uu horraantii toddobaadkan joojiyay shir-madaxeedkii ka dhici lahaa, madaxweyne Trump waxaa uu haatan sheegay in arrintu si wanaagsan u socoto, ayna eegayaan in shirkaasi qabsoomo bisha June 12-keeda sida uu qorshuhu ahaa.
Maxaad ka ogtahay haweenka ugu taajirsan adduunka?